Ziziphi iindlela zokufumana i-PR ephezulu ukulandela i-backlinks kwi-blogs?
Ibhulogi ye-Commentluv yindlela efanelekileyo yokufumana i-backlink ephezulu ye-PR ephezulu edla ukuyeka ii-webmasters zam. Esi sihloko siya kuhlala sichasana ngaso. Iibhulogi ze-Commentluv zibonelela ngeenzuzo zabo kubanikazi bewebhusayithi njengoko zinceda ukwakha iikhonkco ezinamandla njengoko zibuyisela ikhonkco ebonisa enye yezithuba zakho zeblogi.
Kule nqaku, siza kuxubusha iindlela ezithile ezibalulekileyo zokwakha i-PR ephezulu ukulandela i-backlinks kwi-blogs commentliv.
Makhe siqale sixoxe ngokubhekiselele kwiiblogi ze-commentluv kunye nokuba ziphi na ukuzifumana. Ezi ntlobo zeeblogi zikuvumela ukuba udibanise enye yebhanki yakho kunye nokupasa ijusi yelunjani kumgangatho wakho kumaphepha akho ewebhu. Uninzi lwabaphathi bewebhu bathi ukuba ukulandela i-backlinks kunenani elixabisekileyo kwi-website yokwenza ngcono ngaphandle kokulandela. Nangona kunjalo, zombini ezi ntlobo zineenzuzo zabo zokufumana izithuthi zendalo. Ukudala iphrofayile yekhonkco esemgangathweni, kufuneka udale zombini ulandelele kwaye ungalandeli i-backlinks. Njengomgaqo, akukho ukulandela i-backlink kwiindawo eziphezulu ze-PR kubangela ukuba utsha olutsha lulandele i-backlinks kwaye uphakamise ukuhamba kwezithuthi kwiwebhusayithi. Ukuba wenza i-backlinks kwiiblogi zakho okanye kwiwebhsayithi, kufuneka uhlale ukhumbule ukuba i-backlink izakwenziwa ngesicwangciso esicatshulwa kakuhle njengoko kuphucula ukubonakala kweblogi yakho.
Ndiyathanda i-Neil Patel ingcamango yokwakha izixhumanisi. Wafumanisa ingcamango yokwakha idibanisa ngendlela ekhethiweyo. Le ndlela ikunika ithuba lokulandelela ukusebenza kwakho kwaye uthathe inyathelo elifanelekileyo ngelixa isicwangciso esinye asisebenzi.
Yenza iisayithi zebhukmakhi zentlalo
Ngenxa yokuhlaziywa kwe-algorithm ye-Google rhoqo, ezininzi zeeblogi zigqiba ukwenza izixhumanisi zazo zingabonakali zikhangele. Nangona kunjalo, ezinye zeemblogi ze-commentluv zikhoyo kwaye zibonelela abanini bewebhusayithi abanomgangatho ophezulu wokulandela i-backlinks.
Ngokuqhelekileyo, ukuthumela iblogi yindlela elula yokudala i-backlinks. Le ndlela ihlolwe ngabaphathi be-webmasters abaninzi abaphumeleleyo, kwaye ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, ivelisa iziphumo ezifanelekileyo malunga neendlela, izithuba kunye nokuguqulwa. Kufuneka uthathe isakhiwo sekhonkco njengendlela yokwakha ubudlelwane. Ekuqaleni, akuyi kukunika inzuzo. Nangona kunjalo, ekuhambeni kwexesha, uya kuba nakho ukwakha igunya kunye nokwandisa i-traffic kwiwebhusayithi yakho.
Ezinye zeeblogi zinciphisa inani lamagqabaza kwinqaku ngalinye. Bavumela ukudala i-backlinks emva kwee-commentators kuqala. Ulawulo lweblogi ngokwabo lenza isigqibo sokuba uyavuma ukuba ulandele i-backlinks okanye cha. Ukuba babona ezinye izenzo ze-spammy kwiziko lakho, banokukunqanda ukuba ufake i-backfinks kwiblogi yabo. Nangona kunjalo, ukuba bafumanisa izimvo zakho zezinto eziphilayo kunye nezifanelekileyo kumxholo oxoxwa ngawo, baya kukunika i-backfinks njalo emva kokuba ubeke izimvo kwiiblogi zabo.
Iingcebiso zokudala i-backlinks kwi-blogs ye-Commentluv
Okokuqala, zama ukujonga u-spammy. Ukwakha idumela elilungileyo kwiblogi, kufuneka ushiye izimvo eziphezulu kunye ezifanelekileyo. Qinisekisa ukuba ufunde iincwadana ngokucacileyo kwaye uqonde isihloko. Ngaphandle koko, uya kubhala izimvo ezingabambeleli kwinqanaba kwaye zikhangele izinto ezingekho ngokwemvelo. Ngaphezu koko, ungazami ukuvakalisa ishishini lakho kwi-intanethi kwiingxelo zamanqaku angabalulekanga kwishishini lakho. Uya kususwa kuloo nto kwaye ungalokothi ufumane ithuba lokufumana i-backlinks kule blogi. Kufuneka uzame ukungabi ngaphezu kwe-backlinks ezinxulumene nazo njengoko zingabonakala zingekho ngokwemvelo nakwi-spammy. Ngaphezu koko, ndiyakumcebisa ukuba ugweme izimvo zomgca omnye kunye ezimbini Source .